फ्लाईबल, रमाइलो क्यानाइन खेल | कुकुरहरु को विश्व
फ्लाईबल, एक रमाईलो क्यानाइन खेल
कुकुरहरूले आफ्नो शरीर र दिमागलाई सन्तुलित राख्न शारीरिक गतिविधि आवश्यक छ। यसैले यो सिफारिश गरिन्छ कि उनीहरू केही खेल खेल्छन्, दैनिक हिंड्नुको साथसाथै, जे भए पनि आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, फ्लाईबल राम्रो विकल्प हुन सक्छ, किनकि यसले यी पशुहरूलाई धेरै फाइदाहरू ल्याउँछ।
1 फ्लाईबलको उत्पत्ति
4 सीमा र सल्लाहहरू
Este कुकुर खेलकुद कल गरिएको उपकरणबाट उत्पन्न हुन्छ फ्लाईबल १ 70 s० को दशकमा अष्ट्रेलियाली वैज्ञानिक हर्बर्ट वाग्नरले आविष्कार गरेका थिए। यो उपकरण कुकुरहरूमा बल हाल्ने डिजाइन गरिएको थियो, त्यसैले तिनीहरू घरमा एक्लै हुँदा रमाइलो गर्न सक्थे।
जब वाग्नरले यो परिचय गर्‍यो उत्तर अमेरिकी टेलिभिजनमा प्रोजेक्ट, सार्वजनिक उत्साहित। यो खेलमा लागू नहुन्जेल बिस्तारै उनको विचार विकसित भयो, जुन द्रुत रूपमा आकार लिन थाल्यो र लोकप्रिय हुन थाल्यो।
यो अनुशासनलाई नियमित गर्नको लागि विशेष नियमहरू स्थापना गर्न लामो समय लागेन। यसैले दौडको वर्गीकरण, बाधाको रणनीतिक स्थिति र च्याम्पियनशिप खडा भयो। अहिले ठूला राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन्छन्, जुन टेलिभिजनमा पनि प्रसारित हुन्छ र सार्वजनिक द्वारा राम्रो स्वागत गरिन्छ।
यो प्रत्येक चार कुकुरको दुई टोलीमा गरिन्छ। प्रत्येक जनावरले उपकरणमा नपुगेसम्म बाधा कोर्स गर्नुपर्दछ फ्लाईबल, जो टेनिस बल फ्याक गर्न यसको खुट्टा संग सञ्चालन गर्दछ। कुकुरले बल समातिन्छ र सुरुको बिन्दुमा फिर्ता जान्छ, जहाँ उसले आफ्नो टीमको अर्को कुकुरबाट लिन्छ।
समूह जुन अन्तिम रेखामा पहिले पुग्छ र केही गल्तीहरू जीत गर्दछ।। यी दण्डहरू बोक्छन् र दिइन्छ, उदाहरणका लागि, कुकुरले बल खसाल्छ, एउटा अवरोधलाई बेवास्ता गर्दछ वा बाटोमा गल्ती हुन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया विभिन्न कोचहरू द्वारा निर्देशित छ र निर्णायक द्वारा अनुगमन गरिएको।
बाधाहरूको उचाई आकार र जातिमा निर्भर गर्दछ सहभागी कुकुरहरु को। यस कारणले गर्दा, जनावरहरूलाई पहिले बिभिन्न कोटीहरूमा वर्गीकृत गरिएको थियो। त्यसकारण, अवरोधहरू २० सेन्टीमिटरदेखि अधिकतम cm० सेन्टीमिटरसम्मको हुन सक्दछ। ती सबैलाई 20.०40 मिटरको दूरीले विभाजित गरिन्छ।
बलहरू थोरै हुनै पर्छ ताकि कुकुरले सजिलैसँग समात्न सक्दछ, तर डुब्ने जोखिमलाई हटाउन पर्याप्त मात्रामा छ। आदर्श रूपमा यसको आकार टेनिस बलहरू जस्तै हुनुपर्छ। थप रूपमा, ती गुणस्तरीय सामग्रीबाट बनाउनु पर्छ जुन जनावरहरूको लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, जसले ब्रेक गर्न वा नशा गर्न सक्दैन।
हामी २०१२ मा एक प्रतिस्पर्धाको बखत रेकर्ड गरिएको यस भिडियोमा उदाहरण देख्न सक्छौं:
यो खेलले महत्त्वपूर्ण फाइदा ल्याउँछ दुबै कुकुरहरू र तिनीहरूका मालिकहरूलाई। तिनीहरू मध्ये केही हुन्:
जनावरको अ Stre्गलाई बलियो बनाउँछ।
यसले हामीलाई उहाँसँग सम्बन्ध राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको एकाग्रता बढाउनुहोस्।
तपाईंको गति र फुर्ती बढाउनुहोस्।
तनाव कम गर्नुहोस्।
जनावरको आत्मविश्वास बढाउँदछ।
मोटापा र ओस्टियोआर्थराइटिस जस्ता रोगहरू रोक्दछ।
कुकुरलाई यसको उर्जा सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्नुहोस्।
आधारभूत आज्ञाकारिता आदेशहरू लागू गर्नुहोस्।
यो सहिष्णुकरणको सही पक्षमा छ।
र यो मात्र होइन। यो खेलको लागि प्रशिक्षण समय आवश्यक पर्दछ, जुन "बल" मालिकहरूलाई उनीहरूको कुकुर संग लामो घण्टा बिताउन, उनलाई बुझ्न र उनीसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न सिक्न। यस तरीकाले, दिमागको राम्रो स्थिति दुबैका लागि अनुकूल छ र "कुकुर-मानव" सम्बन्ध सुधारिएको छ।
सीमा र सल्लाहहरू
आज यो खेल यूनाइटेड किंगडम र क्यानडा जस्ता देशहरूमा व्यापक रूपमा अभ्यास भइरहेको छ। तर स्पेनमा त्यहाँ कुनै नियमन फ्लाईबल प्रतियोगिताहरू छैनन्, तर हामी असंख्य चपलता क्लबहरू र कुकुर स्कूलहरू फेला पार्छौं जुन हामीलाई यसलाई एक शौकको रूपमा अभ्यास गर्ने विकल्प प्रदान गर्दछ।
कुनै कुकुर यस खेलको लागि उपयुक्त छ, यसको जात वा आकारको पर्वाह नगरी; जहाँसम्म, यदि हाम्रो कुकुर बुढो छ वा स्वास्थ्य समस्या छ, हामीले यसलाई पहिले पशु चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ.
उदाहरणका लागि, मुटुको समस्या भएका कुकुरहरूले यो गतिविधि गर्नुहुन्न उच्च गहनता, किनकि यसको लागि अथक प्रयास चाहिन्छ। त्यसरी नै, जोलाई ओस्टियोआर्थराइटिस वा जोड़को दुखाइ छ, उनीहरुलाई सिफारिश गरिदैन, किनकि उफ्रदा तिनीहरू आफैलाई चोट पुर्‍याउँछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » फ्लाईबल, एक रमाईलो क्यानाइन खेल
कुकुरको आनुवंशिकी के हो भनेर कसरी जान्ने?
किन कुकुर मान्छे को सबै भन्दा राम्रो मित्र हो?